CC Warsame oo farta ku fiiqay hoggaanka hay’adda amniga | KEYDMEDIA ENGLISH
CC Warsame oo farta ku fiiqay hoggaanka hay’adda amniga
Musharrax Madaxweyne, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa muujiyay tuhun ah in hoggaanka hay’adaha amniga ee DF, qey ka qaateen fududeynta weerarkii maanta Al-Shabaab ku qaadeen garoonka diyaaradaha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa shaki xooggan ka muujiyay, sida fudud oo dagaallamayaal ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, ugu suura gashay in ay gudaha u galaan, xeyndaabka garoonka diyaaradaha gaar ahaan aagga aadka loo ilaaliyo ee Xalane.
Warsame, oo sheegay in dhawaanahaan ay soo gaarayeen digniino amni oo isi soo tarayey, ayaa sidoo kale, dareen ka muujiyay in weerarka maanta lagu qaaday xerada Xalane, uu farrin u yahay doorashada Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad ee JFS, oo la qorsheeyay in lagu qabto teendhada Afisyooni.
“Al-shabaab xoog kuma soo gelin gudaha, wayna cadahay in lala shaqeeyey, loona fududeeyey hawlgalka. Waxaa kaloo iyana muuqata in weerarkii maanta uu jawaab u ahaa farriintii ahayd in doorashada guddoonka Baarlamaanka lagu qabto teendhada Afisyoone”. Ayuu yiri CCWarsame.
Musharrax Madaxweyne, Warsame, wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in xilligaan xasaasiga ah ee lagu jiro kala guurka, ay hay’adihii amniga gacanta ku yahaan, kooxo Fahad iyo Farmaajo ka amar qaata, kuwaasoo uu ku eedeeyay in waddo kasta u maraya xaqiijinta dantooda shakhsiga ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayuu uguu ugu baaqay, in uusan indhaha ka laaban masuuliyadda ka saaraan dalka, gaar ahaan amniga iyo hawlaha muhiimka u ah, xilliga kala guurka, wuxuuna ugu baaqay inuu dib u habayn, ku sameey hoggaanka hay’adda amniga.
Tan iyo billowgii sanadkaan, xaaladda amni ee caasimadda ayaa u muuqatay mid faraha ka baxday, halka, shaqsiyaadka shaqda amni u xil-saaran, si aan ganbad lahayn ugu mashquulsan yihiin doorashoon/xulashooyinka ka socda qaar ka mid ah maamullada gobolleedyada dalka.